आयुक्त पाठकलाई महाअभियोग कहिले ?
डेढ बर्षको तलवले तीन करोडमा कसरी बंगला खरिद गरे ?
काठमाडौं, २६ पुस । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध ब्यवस्थापिका संसदमा महाभियोग दर्ता भएर कारबाही चलिरहेकै बेलामा सर्वोच्च अदालतले उनलाई उक्त पदका लागि योग्यता नपुगेको भन्दै पदमुक्त गरेको छ ।
कार्की अदालतबाट पदमुक्त भएसँगै अख्तियारका विवादास्पद आयुक्त राजनारायण पाठकलाई संसदले महाभियोग लगाएर हटाउनुपर्ने माग डा. गोविन्द केसीले गरेका छन् । आयुक्त पाठक सरकारी वकिलबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका हुन् ।
सेवा प्रवेश गरेदेखि सहन्यायाधीवक्ता हुँदासम्मको पाठकसँग काम गरेकाहरु भन्छन्, सरकारी वकिल क्षेत्रमा उनी अति बदनाम र भ्रष्ट छवि भएका ब्यक्ति हुन् । आयुक्त पाठकले पदको दुरुपयोग गर्दै आफ्नी छोरी प्रिया पाठकलाई एमबीबीएस अध्ययन गराउनका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षामा हस्तक्षेप गरेका थिए ।
पाठकले लोकमानसँग मिलेर विभिन्न मन्त्रालयका ठेक्कबापट्टा र सरुवा बढुवामा चरम हस्तक्षेप गर्दैआएका थिए । सार्वजनिक खरिद ऐन नियमअनुसार भएका टेण्डरमा प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका कम्पनीलाई काम नदिई पाठकले अर्कैलाई दिन दबाब दिने गरेको काठमाडौं महानगरपालिकादेखि देशका अरु स्थानीय निकायका प्रमुखले पनि भोग्दैआएका थिए ।
उनले भनेअनुसार नगरे १३ पन्नेको आतंक देखाउने गरिएका थिए । मुद्दा चल्ने शंकास्पद फाइल तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्नेमा पनि आयुक्त पाठक नै रहेको अभिलेख हेरेको खण्डमा पुष्टी हुनेछ ।
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का तत्कालीन अध्यक्ष गणेश थापाले गरेको ५९ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार प्रकरणदेखि धोवीखोला करिडोरको एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट विनाटेण्डर उपभोक्ता समितिलाई दिएर भ्रष्टाचार गर्ने भाइकाजी तिवारीलाई जोगाउने काम पाठकले नै गरेका थिए ।
अख्तियारले नदेखेको एन्फाको भ्रष्टाचार पछि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा)ले देख्यो । र, गणेश थापा १० बर्षका लागि निलम्बन भए । उनले एन्फाको अध्यक्षबाट हात धुनुप¥यो । धोबीखोला करिडोर आयोजनाको भ्रष्टाचार उजुरी छानबिनमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका तत्कालीन जिल्ला आयुक्त भाइकाजी तिवारीसहितका केही प्राविधिक मुछिएका थिए, खबर दृष्टिमा लेखिएको छ ।
उक्त उजुरी छानबिनकै क्रममा आयुक्त सावित्री गुरुङ एक कार्यक्रममा अमेरिका गएको मौका पारी कार्कीले हतारहतार प्रारम्भिक अनुसन्धानमा रहेको उजुरी तामेलीमा राखेका थिए । भाइकाजी तिवारीसँग ठूलै आर्थिक लेनदेन गरी मुद्दा तामेलीमा राखिएको स्रोतले बताएको छ ।
अख्तियारको आयुक्त पदको दुरुपयोग गर्दै आयोजना परियोजनाका प्रमुखसँग बार्गेनिङ गरी नियुक्ति भएको डेढ बर्षमै आयुक्त पाठकले तीन कारोड असी लाख रुपैययाँमा काठमाडौंको शान्तिनगरमा भव्य महल खरिद गरेको समाचार नै सार्वजनिक भयो ।
अख्तियारका एक आयुक्तको प्रश्न छ, पाठकको डेढ बर्षको तलव सुविधाले उनले तीन करोडमा कसरी बंगला खरिद गरे, उनको सम्पत्तिको स्रोत कसले खोज्ने ? कार्कीलाई महाभियोग लगाएर हटाउने प्रक्रिया टुंगोमा नपुग्दै अदालतले फैसलाले उनी पदमुक्त भइसकेका छन् । संसदले पाठक जस्ता बदनाम आयुक्तलाई महाभियोग लगाएर हटाउनुपर्छ, अख्तियारका एक अधिकारीले भने ।